အရသာအားလုံး ပါးစပ်ထဲ စိမ့်တဲ့ သီးစုံ သာကူဟာလဝါနဲ့ ငှက်ပျောသီးချိစ် ဆနွင်းမကင်း – Zeekwat Hot News
Notice: Undefined property: stdClass::$url_target in /home/fe5373brwlyk/public_html/wp-content/themes/vmagazine/inc/etc/template-functions.php on line 137
တနေ့တခြား ပိုပိုပြီး လှလာတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်... May 21, 2019
ရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီတဲ့ ထိုင်းစတားစုံတွဲများ... May 21, 2019
စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ Party Night မှာ ရင်ဖိုဖွယ်ကောင်းအောင် ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိနေတဲ့... May 21, 2019
နတ်သမီးလေး တစ်ပါးလို လှပကျော့ရှင်း နေတဲ့ ပုံရိပ်တွေနဲ့ ပွဲတစ်ခုကို တက်ရောက်ခဲ့ မ... May 21, 2019
အရသာအားလုံး ပါးစပ်ထဲ စိမ့်တဲ့ သီးစုံ သာကူဟာလဝါနဲ့ ငှက်ပျောသီးချိစ် ဆနွင်းမကင်း
May 17, 20190253
မြန်မာလူမျိုးတွေအကြိုက် သာကူဟာလဝါလေးကို သီးစုံလေးနဲ့လုပ်ထားပါတယ်။ သူ့ရဲ့အရသာကတော့ သီဟိုဠ်စေ့ပါလို့ ဆိမ့်နေသလို ဖရုံယိုပါလို့ချိုချိုလေးနဲ့ အလွန်စားကောင်းပါတယ်။ လုပ်စားကြည့်ရအောင်နော်။
၁။ အသေးဆုံး သာကူစေ့ – ၂ ခွက်
၂။ ရေ – ၃ ခွက် (သို့ ) ၇၂၀ မီလီလီတာ ml
၃။ အုန်းနို့ - ၄၀၀ ml
၄။ နွားနို့ - ၄၀၀ ml
၅။ သကြား – ထမင်းစားဇွန်း ၁၀ ဇွန်း
၆။ ညောင်စေးကျအောင်ကျိုထားသော ကြံသကာရည် – ၁ ခွက် (သို့ ) ထမင်းစားဇွန်း ၁၆ ဇွန်း (ကြံသကာကိုအရောင်ရင့်ရင့်လေးဟာသုံးရင် အရောင်ပိုလှပါတယ်။)
၇။ ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း လေးပုံတပုံ
၈။ ထောပတ် – ထမင်းစားဇွန်း ၁၀ ဇွန်း
၉။ ဆီ – ထမင်းစားဇွန်း ၅ ဇွန်း
၁၀။ ဘိန်းစေ့ – ထမင်းစားဇွန်း ၃ ဇွန်း
၁၁။ ခြစ်ထားသော အုန်းသီးဖတ် – ၁ ခွက်
၁၂။ Top သီဟိုဠ်စေ့ – ၁ ခွက်
၁၃။ ဖရုံယို – ၅ ခု
(၁ခွက် =240 ml = ရိုးရိုးကော်ဖီခွက် ၁ ခွက် = ထမင်းစားဇွန်း ၁၆ ဇွန်း)
( ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း = 1 tablespoon= 15ml)
(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း = 1 teaspoon=5ml)
၁။ သာကူစေ့ကိုရေဆေးပြီးရေစစ်ထားပါ။ Top သီဟိုဠ်စေ့ကို အတုံးအသးလေးတွေဖြစ်သွားအောင် အနည်းငယ်ထောင်းပေးပါ။ ဖရုံယိုကို အတုံးအသေးလေးတွေတုံးထားပါ။
၂။ အိုးကြီးကြီးတခုထဲမှာ ရေ၊ အုန်းနို့ ၊နွားနို့ ၊ဆား၊ ဆီတို့ ကိုထည့်ပြီးပွက်လာအောင်တည်ပါ။ ပွက်လာလျှင် သာကူကိုထည့်ရ်ျ အဆက်မပျက်မွှေပေးပါ။
၃။ မွှေနေပြီး ၃ မိနစ်လောက်နေလျှင် သကြား၊ ကြံသကာရည်တို့ ကိုထည့်ပါ။ ထို့ နောက်ထောပတ်၊ Top သီဟိုဠ်စေ့၊ အုန်းသီးဖတ်တို့ကို ထည့်ပြီး အဆက်မပျက် ဆီပြန်လာသည်အထိမွှေပေးပါ။
၄။ ဆီပြန်လာလျှင် ဘိန်းစေ့နှင့် ဖရုံယိုတို့ကိုထည့်မွှေပါ။ (ဘိန်းစေ့ကိုအပေါ်ကဖြူးမည်ဆိုလျှင်တော့ နောက်ဆုံးဘန်းထဲကိုထည့်ပြီးမှအပေါ်ကဖြူးပါ။) ရေမကျန်တော့ပဲ ဆီပြန်ပြီးလုံးလာလျှင် မီးဖိုပေါ်မှချရ်ျ ဘန်းထဲထည့်အအေးခံပါ။ (Comment မှာ video နဲ့ပြထားပါတယ်။)
၅။ အေးသွားလျှင် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အရွယ်အစားလှီးရ်ျ သုံးဆောင်နို်င်ပါပြီရှင်။
ဆိမ့်နေအောင်စားလို့ကောင်းတဲ့ ငှက်ပျောသီးချိစ် ဆနွင်းမကင်းလေးပါ။ အိစံဆိုရင် မုန့်လုပ်ပြီးပြီးချင်း ပူနေတုန်းလေးစားလိုက်တာ အများကြီးကိုကုန်သွားကော။ ငှက်ပျောသီးနဲ့ချိစ်ရောထားတဲ့အရသာလေးဆိုတော့ ဘာပြောကောင်းမလဲအရမ်းကိုစားကောင်းပေါ့။ လုပ်စားကြည့်ရအောင်နော်။
ပါဝင်သောပစ္စည်းများ (ဘန်းအကြီး ၁ ဘန်းစာ)
၁။ သီးမွှေး ငှက်ပျောသီးမှည့်မှည့် – ၈ လုံး (သို့ ) သေးရင် ၉ လုံး
၂။ အုံးသီးဖတ် – ၁ ခွက်
၃။ ရွှေကြည် – ၁ ခွက်
၄။ ဂျုံ မှုန့် - ထမင်းစားဇွန်း ၁၀ ဇွန်း
၅။ ချိစ်အမျှင် – ထမင်းစားဇွန်း ၁၂ ဇွန်း (အိစံသုံးထားတာကတော့ Cheddar cheese ကိုသုံးထားပါတယ်။)
၆။ သကြား – ၁ ခွက် ခွဲ
၇။ ဆား -လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ ၀က်
၈။ အုံးနို့ - ၄၀၀ ml
၉။ ထောပတ် – ထမင်းစားဇွန် ၈ ဇွန်း (သို့ ) ခွက် တ ၀က်
၁၀။ ဘိန်းစေ့ – အနည်းငယ်
၁၁။ စားသောဆိုးဆေး အနီေ၇ာင် – ၄ စက် (သို့) ၅ စက် (လျော့ထည့်လို့ လဲရပါတယ်။မထည့်လို့ လဲရပါတယ်။)
( ၁ခွက် = 240 ml = ရိုးရိုးကော်ဖီခွက် ၁ ခွက် = ထမင်းစားဇွန်း ၁၆ ဇွန်း) ( ထမင်းစားဇွန်း = 1 tablespoon= 15 ml ) ( လက်ဖက်ရည်ဇွန်း = 1 teaspoon =5ml)
၁။ ငှက်ပျောသီးကို လက်ဖြင့် ခြေပါ။ (အရမ်းကျေရန်မလိုပါ။)
၂။ blender ထဲသို့ အုံးသီးဖတ်၊ ထောပတ် နှင့် အုံးနို့ ၊သကြား၊ဆားတို့ကို ထည့်ရ်ျ မွှေပါ။
၃။ ဇလုံ တခုထဲတွင် ငှက်ပျောသီး ၊ ခြေထားသောအုံးသီးဖတ် အနှစ်၊ ရွှေကြည်၊ ဂျုံမှုန့် ၊ ဆိုးဆေး အနီေ၇ာင်တို့ ကိုရောရ်ျ သမအောင်မွှေပါ။သမသွားလျှင် ချိစ်အမျှင်ထမင်းစားဇွန်း ၁၀ ဇွန်းကို ထည့်ပြီး သမအောင်လုပ်ပါ။
၄။ မုန့် ဖုတ်မည့် ဗန်းထဲကို ဆီ (သို့ ) ထောပတ်သုတ်ထားပါ။ ထို ဗန်းထဲသို့ မုန့် အနှစ်များကို ထည့်ပြီး အပေါ်မှ ဘိန်းစေ့ များကို ဖြူးပေးပါ။
၅။ ၃၅၀’F (175’C) မှာ အပူပေးထားသော oven ထဲတွင် ၁ နာရီ ထည့်ဖုတ်ပါ။ ပြီးရင်ကျန်သော ချိစ် ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်းကို အပေါ်ကနေဖြူးပြီး အပေါ်မီးဖြင့် ၅ မိနစ်လောက်ဖုတ်ပါ။ အအေးခံရ်ျ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အရွယ် ဖြတ်ရ်ျ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီရှင်။
Source From Ei San Homemade Inspiration
့မွနျမာလူမြိုးတှအေကွိုကျ သာကူဟာလဝါလေးကို သီးစုံလေးနဲ့လုပျထားပါတယျ။ သူ့ရဲ့အရသာကတော့ သီဟိုဠျစပေ့ါလို့ ဆိမျ့နသေလို ဖရုံယိုပါလို့ခြိုခြိုလေးနဲ့ အလှနျစားကောငျးပါတယျ။ လုပျစားကွညျ့ရအောငျနျော။ပါဝငျသောပစ်စညျးမြား၁။ အသေးဆုံး သာကူစေ့ – ၂ ခှကျ၂။ ရေ – ၃ ခှကျ (သို့ ) ၇၂၀ မီလီလီတာ ml၃။ အုနျးနို့ - ၄၀၀ ml၄။ နှားနို့ - ၄၀၀ ml၅။ သကွား – ထမငျးစားဇှနျး ၁၀ ဇှနျး၆။ ညောငျစေးကအြောငျကြိုထားသော ကွံသကာရညျ – ၁ ခှကျ (သို့ ) ထမငျးစားဇှနျး ၁၆ ဇှနျး (ကွံသကာကိုအရောငျရငျ့ရငျ့လေးဟာသုံးရငျ အရောငျပိုလှပါတယျ။)၇။ ဆား – လကျဖကျရညျဇှနျး လေးပုံတပုံ၈။ ထောပတျ – ထမငျးစားဇှနျး ၁၀ ဇှနျး၉။ ဆီ – ထမငျးစားဇှနျး ၅ ဇှနျး၁၀။ ဘိနျးစေ့ – ထမငျးစားဇှနျး ၃ ဇှနျး၁၁။ ခွဈထားသော အုနျးသီးဖတျ – ၁ ခှကျ၁၂။ Top သီဟိုဠျစေ့ – ၁ ခှကျ၁၃။ ဖရုံယို – ၅ ခု(၁ခှကျ =240 ml = ရိုးရိုးကျောဖီခှကျ ၁ ခှကျ = ထမငျးစားဇှနျး ၁၆ ဇှနျး)( ထမငျးစားဇှနျး ၁ ဇှနျး = 1 tablespoon= 15ml)(လကျဖကျရညျဇှနျး ၁ ဇှနျး = 1 teaspoon=5ml)ပွုလုပျနညျး၁။ သာကူစကေို့ရဆေေးပွီးရစေဈထားပါ။ Top သီဟိုဠျစကေို့ အတုံးအသးလေးတှဖွေဈသှားအောငျ အနညျးငယျထောငျးပေးပါ။ ဖရုံယိုကို အတုံးအသေးလေးတှတေုံးထားပါ။၂။ အိုးကွီးကွီးတခုထဲမှာ ရေ၊ အုနျးနို့ ၊နှားနို့ ၊ဆား၊ ဆီတို့ ကိုထညျ့ပွီးပှကျလာအောငျတညျပါ။ ပှကျလာလြှငျ သာကူကိုထညျ့ရျြ အဆကျမပကျြမှပေေးပါ။၃။ မှနေပွေီး ၃ မိနဈလောကျနလြှေငျ သကွား၊ ကွံသကာရညျတို့ ကိုထညျ့ပါ။ ထို့ နောကျထောပတျ၊ Top သီဟိုဠျစေ့၊ အုနျးသီးဖတျတို့ကို ထညျ့ပွီး အဆကျမပကျြ ဆီပွနျလာသညျအထိမှပေေးပါ။၄။ ဆီပွနျလာလြှငျ ဘိနျးစနှေ့ငျ့ ဖရုံယိုတို့ကိုထညျ့မှပေါ။ (ဘိနျးစကေို့အပျေါကဖွူးမညျဆိုလြှငျတော့ နောကျဆုံးဘနျးထဲကိုထညျ့ပွီးမှအပျေါကဖွူးပါ။) ရမေကနျြတော့ပဲ ဆီပွနျပွီးလုံးလာလြှငျ မီးဖိုပျေါမှခရျြ ဘနျးထဲထညျ့အအေးခံပါ။ (Comment မှာ video နဲ့ပွထားပါတယျ။)၅။ အေးသှားလြှငျ ကွိုကျနှဈသကျရာ အရှယျအစားလှီးရျြ သုံးဆောငျနျိုငျပါပွီရှငျ။
ဆိမျ့နအေောငျစားလို့ကောငျးတဲ့ ငှကျပြောသီးခြိဈ ဆနှငျးမကငျးလေးပါ။ အိစံဆိုရငျ မုနျ့လုပျပွီးပွီးခငျြး ပူနတေုနျးလေးစားလိုကျတာ အမြားကွီးကိုကုနျသှားကော။ ငှကျပြောသီးနဲ့ခြိဈရောထားတဲ့အရသာလေးဆိုတော့ ဘာပွောကောငျးမလဲအရမျးကိုစားကောငျးပေါ့။ လုပျစားကွညျ့ရအောငျနျော။ပါဝငျသောပစ်စညျးမြား (ဘနျးအကွီး ၁ ဘနျးစာ)၁။ သီးမှေး ငှကျပြောသီးမှညျ့မှညျ့ – ၈ လုံး (သို့ ) သေးရငျ ၉ လုံး၂။ အုံးသီးဖတျ – ၁ ခှကျ၃။ ရှကွေညျ – ၁ ခှကျ၎။ ဂြုံ မှုနျ့ - ထမငျးစားဇှနျး ၁၀ ဇှနျး၅။ ခြိဈအမြှငျ – ထမငျးစားဇှနျး ၁၂ ဇှနျး (အိစံသုံးထားတာကတော့ Cheddar cheese ကိုသုံးထားပါတယျ။)၆။ သကွား – ၁ ခှကျ ခှဲရ။ ဆား -လကျဖကျရညျဇှနျး တ ဝကျ၈။ အုံးနို့ - ၄၀၀ ml၉။ ထောပတျ – ထမငျးစားဇှနျ ၈ ဇှနျး (သို့ ) ခှကျ တ ဝကျ၁၀။ ဘိနျးစေ့ – အနညျးငယျ၁၁။ စားသောဆိုးဆေး အနီရောငျ – ၄ စကျ (သို့) ၅ စကျ (လြော့ထညျ့လို့ လဲရပါတယျ။မထညျ့လို့ လဲရပါတယျ။)( ၁ခှကျ = 240 ml = ရိုးရိုးကျောဖီခှကျ ၁ ခှကျ = ထမငျးစားဇှနျး ၁၆ ဇှနျး) ( ထမငျးစားဇှနျး = 1 tablespoon= 15 ml ) ( လကျဖကျရညျဇှနျး = 1 teaspoon =5ml)ပွုလုပျနညျး၁။ ငှကျပြောသီးကို လကျဖွငျ့ ခွပေါ။ (အရမျးကရြေနျမလိုပါ။)၂။ blender ထဲသို့ အုံးသီးဖတျ၊ ထောပတျ နှငျ့ အုံးနို့ ၊သကွား၊ဆားတို့ကို ထညျ့ရျြ မှပေါ။၃။ ဇလုံ တခုထဲတှငျ ငှကျပြောသီး ၊ ခွထေားသောအုံးသီးဖတျ အနှဈ၊ ရှကွေညျ၊ ဂြုံမှုနျ့ ၊ ဆိုးဆေး အနီရောငျတို့ ကိုရောရျြ သမအောငျမှပေါ။သမသှားလြှငျ ခြိဈအမြှငျထမငျးစားဇှနျး ၁၀ ဇှနျးကို ထညျ့ပွီး သမအောငျလုပျပါ။၄။ မုနျ့ ဖုတျမညျ့ ဗနျးထဲကို ဆီ (သို့ ) ထောပတျသုတျထားပါ။ ထို ဗနျးထဲသို့ မုနျ့ အနှဈမြားကို ထညျ့ပွီး အပျေါမှ ဘိနျးစေ့ မြားကို ဖွူးပေးပါ။၅။ ၃၅၀’F (175’C) မှာ အပူပေးထားသော oven ထဲတှငျ ၁ နာရီ ထညျ့ဖုတျပါ။ ပွီးရငျကနျြသော ခြိဈ ထမငျးစားဇှနျး ၂ ဇှနျးကို အပျေါကနဖွေူးပွီး အပျေါမီးဖွငျ့ ၅ မိနဈလောကျဖုတျပါ။ အအေးခံရျြ ကွိုကျနှဈသကျရာ အရှယျ ဖွတျရျြ သုံးဆောငျနိုငျပါပွီရှငျ။
Nway Htway Editor
အမြင့်ဆုံး ဆုတွေ ထဲက တစ်ဆု ဖြစ်တဲ့ Creu de Sant Jordi ဆုကို ကတ်တလန် အစိုးရက ကိုယ်တိုင် မက်ဆီ ကို ချီးမြှင့်
ဂရစ်ဇ်မန်း နေရာ အစားထိုးဖို့ အတွက် အာဆင်နယ် တိုက်စစ်မှူးကို လာကာဇက် ကို ပစ်မှတ်လာခဲ့တဲ့ အက်သလက်တီကို
တနေ့တခြား ပိုပိုပြီး လှလာတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ Party Night မှာ ရင်ဖိုဖွယ်ကောင်းအောင် ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိနေတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
All Rights Reserved ©2019 ZeeKwat Media
Hey Buddy!, I found this information for you: "အရသာအားလုံး ပါးစပ်ထဲ စိမ့်တဲ့ သီးစုံ သာကူဟာလဝါနဲ့ ငှက်ပျောသီးချိစ် ဆနွင်းမကင်း". Here is the website link: https://zeekwat.com.mm/archives/923. Thank you.